बाढीका कारण धान उत्पादन आधाले घट्ने सरकारी अनुमान, आर्थिक बृद्धि लक्षमा कस्तो असर पर्ला? :: BIZMANDU
बाढीका कारण धान उत्पादन आधाले घट्ने सरकारी अनुमान, आर्थिक बृद्धि लक्षमा कस्तो असर पर्ला?
प्रकाशित मिति: Nov 11, 2017 5:56 PM
लहान । गत साउन भदौमा आएको बाढी पहिरोका कारण सिरहामा यस वर्ष धान उत्पादनमा करिब ५० प्रतिशतले कमी आउने भएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार धान रोपाइँको समयमा आएको बाढीपहिरो, बढ्ने बेलामा पर्याप्त वर्षा नभएको र किराको प्रकोप समेत बढेको कारण यस वर्ष गत बर्षको तुलनामा एक लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुख डा रामचन्द्र यादवले यस वर्ष ४७ हजार ९९८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टनका दरले ९६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने जानकारी दिए।
आव २०७३/७४ मा ५६ हजार हेक्टर जमिनमा प्रतिहेक्टर साढे तीन मेट्रिक टनको दरले एक लाख ९६ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। धान उत्पादन ह्वात्तै घट्ने भएपछि यसबर्ष भारतबाट आयात बढ्ने उनको भनाइ छ।
सिरहामा कुल ६० हजार ७५७ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। जिल्लामा सोना मन्सुरी, कान्छी, राधा १२, सावित्री, रामधान, मन्सुली, हर्दिनाथ, तरहरा–१, सुगा–३ स्थानीय वास्मती लगायत जातका धान खेती हुने गरेको छ।
साउन भदौको बाढीका कारण यस बर्ष देशभरनै धान उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत दाताले सोही कारण यस बर्षको सरकारले लक्ष गरे बमोजिम सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् ।
बाढीका कारण धान उत्पादन आधाले घट्ने सरकारी अनुमान, आर्थिक बृद्धि लक्षमा कस्तो असर पर्ला? को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Hariadhikari[ 2017-11-11 10:32:13 ]
56 lakh ton this year.
PLZ,re-check your source